Homepage Creative | iBiz Service Provider Co., Ltd.
Powerful and Effective engaging websites
Designed to extend the reach of marketing, sales, and
distribution programs for goods into new markets or
to targeted online communities
~ Ataprice your Business can afford ~
~ Get every appotunities you need to run ~
~ Reliable business email ~
Growth your Business with
ကျနော်တို့ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဈေးကွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဈေးကွက်အသစ်ချဲ့ထွင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အရောင်း၊ ကုန်ဖြန့်ဖြူးမှုနဲ့ လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုအပြင် အသစ်သစ်သောဝန်ဆောင်မှု/ထုတ်ကုန်တွေ့ more>>
Ecommerce Site တစ်ခုဖန်တီးရာမှာမိမိရည်ရွယ်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းစနစ်တကျ အခြေခံမှစ၍ ခိုင်ခိုင်မာမာမတည်ဆောက်ထားပါကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတခနအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်သောကြောင့်
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ဖေါက်သည်များ ပိုမိုရရှိဖို့ လိုအပ်နေပါသလား၊
ဘယ်လို ကြော်ငြာလုပ်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးက အရောင်းပိုဖြစ်စေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကို မသေမခြာ ဖြစ်နေပါသလား၊
ရင်းနှီးမှုအနဲဆုံးနဲ့ ထိရောက်မှုအရှိဆုံဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနည်းသုံးပြီး ကြော်ငြာသင့်သလဲ၊more>>
ကျနော်တို့ကကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအောင်မြင်လာဖို့အတွက်စတင်ဆောင်ရွက်ပါကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ customerတွေရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ထားရှိတဲ့လက်ရှိသဘောထားကိုအရင်ဆုံးလေ့လာဆန်းစစ်ပါတယ်။ more>>
IT စီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုကနေနောက် IT အသစ်ပုံစံတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဆိုပေမဲ့ နည်းလမ်းမှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ အဖွဲ့မျိုးနဲ့ ဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက် more>>
ကျနော်တိုရဲ့ multi channel promotion service က လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု/ ထုတ်ကုန် တွေကို online ပေါ်မှတဆင့် လူတိုင်းထံသို့ရောက်အောင် ကြော်ငြာမှုနည်း စနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါက်ရောက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။more>>
ကျနော်တို့ရဲ့ SEO ဝန်ဆောင်မှုများက လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ website များကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်မားဆုံး ရရှိစေရန် အမြဲပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ more>>
IBiz မှ လူကြီးမင်းတို့ ပြုလုပ်လိုသော Special Event များနှင့်ပါတ်သက်ပြီး အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူကြီးမင်းတို့၏ အတွေ့အကြုံ များကိုအခြေပြုပြီး ထိရောက်သော Online စီးပွားရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုပြီး ထိရောက်အောင်မြင်စေရန် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ more>>
Willing to use Digital Marketing Service for your business...
GOMALAR ONLINE BUS TICKETING
Gomalar isabrand of highway express bus booking system for customer and bus services provider.
Omyanmar isaone of the earlest Online Shopping Mall in Myanmar since 2011.
24 NARYEE ONLINE ADVERTISING